परियोजना व्यवस्थापन सफ्टवेयरको साथ मेरा समस्याहरू Martech Zone
कहिलेकाँही मलाई आश्चर्य लाग्दछ कि परियोजना समाधानहरू विकास गर्ने मान्छेहरूले उनीहरू वास्तवमा प्रयोग गर्दछन्। मार्केटिंग स्पेस भित्र, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर आवाश्यक हुन्छ - विज्ञापन, पोष्ट, भिडियो, ह्वाइटपेपर, केस केस परिदृश्य र अन्य प्रोजेक्टहरूको ट्र्याक राख्नु ठूलो समस्या हो।
समस्या जुन हामी सबै परियोजना व्यवस्थापन सफ्टवेयरको साथ चलाउँदछौं अनुप्रयोगको पदानुक्रम हो। प्रोजेक्टहरू श्रेणीक्रमको शीर्ष हुन्, त्यसपछि टोली, त्यसपछि सम्पत्ति कार्यहरू र समयसीमा। त्यो हामी आजकल कसरी काम गर्दैनौं ... विशेष गरी मार्केटरहरू। हाम्रो एजेन्सी सजीलै दैनिक आधारमा +०+ परियोजनाहरू जुगल गर्दैछ। प्रत्येक टोली का सदस्य सायद एक दर्जन सम्म जुगल गर्दैछ।
यो कसरी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरले निरन्तर काम गर्दछ:
यहाँ तीन परिदृश्यहरू छन् जुन म कहिल्यै गर्न सक्दिन परियोजना व्यवस्थापन सफ्टवेयर:
ग्राहक / परियोजना प्राथमिकता - ग्राहकको समय सीमा सबै समय परिवर्तन र प्रत्येक ग्राहकको महत्व फरक हुन सक्छ। म चाहान्छु कि म ग्राहकको महत्त्व बढाउन वा घटाउन सक्छु र प्रणाली पाँदछु जुन सदस्यहरूका लागि कार्य प्राथमिकता परिवर्तन भयो परियोजनाहरु मा काम अनुसार।
कार्य प्राथमिकता - म परियोजना व्यवस्थापन सफ्टवेयर को एक सदस्य मा क्लिक गर्न को लागी सक्षम हुनेछ र आफ्नो सबै परियोजनाहरु को आफ्नो परियोजनाहरु को सबै हेर्न को लागी र त्यसपछि व्यक्तिगत आधार मा प्राथमिकता समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।
सम्पत्ति साझेदारी - हामी प्रायः एक ग्राहकको लागि एक समाधान विकास गर्छौं र त्यसपछि यसलाई ग्राहकहरू बीच प्रयोग गर्दछौं। वर्तमानमा, हामीलाई प्रत्येक प्रोजेक्टमा यसलाई साझेदारी गर्न आवश्यक पर्दछ। यो पागल हो कि म परियोजनाहरू र ग्राहकहरू मार्फत कोडको एक हिस्सा साझा गर्न सक्दिन।
यो हामी कसरी काम गर्छौं भन्ने वास्तविकता हो:
हामीले वास्तवमै यस कार्यहरूका केही प्रबन्ध गर्नका लागि प्रोजेक्ट प्रबन्धक बाहिर टास्क प्रबन्धकको विकासको साथ प्रयोग गरेका छौं, तर यस उपकरणलाई समाप्त गर्न कहिँ समय हुँदैन जस्तो देखिन्छ। हामी यसमा जति धेरै काम गर्छौं, त्यति नै मलाई आश्चर्य लाग्छ किन हामी केवल आफ्नै प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरको पूर्ण विकास गर्दैनौं। कसैलाई पनि समाधानको बारेमा थाहा छ जुन परियोजनाहरू र बजारहरूले वास्तवमा गर्ने बाटोको नजिक काम गर्दछ?
टैग: प्राथमिकताहरूयोजना व्यवस्थापनपरियोजना व्यवस्थापन सफ्टवेयरपरियोजना ब्यबश्थापन सुइटकार्य व्यवस्थापनकार्यहरूटीम व्यवस्थापन
अगस्ट 15, 2013 मा 6: 42 AM
प्राविधिक रूपमा, यो "प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर" नहुन सक्छ, तर म आफ्नो दिन प्रति दिन कार्यहरूमा ट्रेलो प्रयोग गर्न सुरू गर्दैछु। सरलता यसको सबैभन्दा ठूलो गुण हो। मेरा गैर-टेक्निकल ग्राहकहरूले यसलाई कसरी5मिनेट भित्र प्रयोग गर्ने बुझ्न सक्दछन्।
र यो सित्तैं हो।
अगस्ट 15, 2013 मा 8: 54 AM
धन्यवाद @ र एन्ड्रुगल: डिस्क, म यसलाई जाँच गर्छु!
अगस्ट 15, 2013 मा 8: 17 AM
व्यक्तिगत रूपमा, म मेरो SEO व्यवसायको लागि मेरो आफ्नै प्रोजेक्ट म्यानेजर सफ्टवेयर प्रयोग गर्छु। विशेष रूपमा SEO व्यवसायका लागि निर्मित। परियोजना व्यवस्थापन आफै पनि धेरै "सामान्य" छ विभिन्न उद्योगहरूमा सबै प्रकारका व्यवसायको लागि १००% प्रभावकारी।
अगस्ट 21, 2013 मा 6: 23 AM
डगलस, हामीले ब्राइटपड (निर्माण गरेका छौं)http://brightpod.com) वास्तवमा यो दिमाग हो। प्राय: PM उपकरणहरू मार्केटि teams टोलीहरूको लागि निर्माण गरिएको हुँदैन तर तपाईंले ब्राइटपडमा एक नजर राख्नु पर्छ।
केही चीजहरू जुन हामी बिभिन्न तरिकाले गरिरहेका छौं एजेन्सीहरूका लागि ग्राहकहरूद्वारा परियोजनाहरू फिल्टर गर्ने तरिका हो, ग्राहकहरू छलफलमा समावेश हुन्छन् (उनीहरूलाई लगइन नगरीकन), सम्पादकीय क्यालेन्डर र सजिलो कानबान शैली लेआउट जसले चलिरहेको अभियानहरूको लागि बढी अर्थ दिन्छ। चरणहरूमा फैलिएका छन्।
मलाई थाहा छ कि तपाइँ यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ भनेर यसलाई एक स्पिन दिनुहोस्!
मार्स 10, 2015 मा 10: 14 एएम
नमस्ते डगलस। तपाईंको बहुमूल्य अन्तरदृष्टि साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद! केही समय बित्यो, तर यो अझै वास्तविक छ।
मँ मार्केटिंग टोलीहरूको लागि हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट समाधानमा एक नजर राख्न सुझाव दिन्छु - कमिन्डवेयर प्रोजेक्ट - जब लेखमा हाइलाइट गरिएको तपाईंको आवश्यकताहरूको परिप्रेक्ष्यमा देखापर्छ।
Comindware प्रोजेक्टले कार्य प्राथमिकता अनुमति दिन्छ। त्यसो गर्न तपाईले वर्कलोड सेक्सनमा जानु पर्छ। टोली सदस्यमा क्लिक गर्नुहोस् उनीहरूको सबै प्रोजेक्टहरूमा आफ्ना सबै कामहरू देख्नको लागि र त्यसपछि व्यक्तिगत आधारमा प्राथमिकता समायोजन गर्न सक्षम हुनेछ। दुर्भाग्यवस, त्यहाँ कुनै ग्राहक / परियोजना प्राथमिकता छैन, तर व्यक्तिगत आधारमा प्राथमिकता मद्दत गर्न सक्छ - यति छिटो भेरिएन्ट होइन, तर कुनै पनि तरिका। सम्पत्ति बाँडफाँडको लागि तपाईले विशिष्ट छलफल कोठा सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै शीर्षक "उपयोगी सम्पत्ति" र सबै सम्पत्तिका लागि एक एकल हबको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। ती परियोजनाहरु मा उपलब्ध हुनेछ।
Comindware प्रोजेक्ट र -०-दिनको परीक्षणको बारेमा थप जानकारी यहाँ उपलब्ध छन् - http://www.comindware.com/solutions/marketing-project-management/ हामी समाधानको बारेमा तपाईंको प्रतिक्रिया सुनेर खुशी हुनेछौं। के तपाई यसलाई समीक्षा गर्न चाहानुहुन्छ?
सबै भन्दा राम्रो परियोजना व्यवस्थापन उपकरण
जुलाई,, २०१ at 12::2016। बिहान
त्यो लेख अचम्मको थियो, म तपाईको विचारहरुबाट धेरै प्रभावित छु। मैले ब्लगको यस साइटबाट सबै भन्दा राम्रो जानकारी पाएँ, यो सबै र हाम्रो लागि धेरै उपयोगी छ। यो पोष्ट साझा गर्नुभएकोमा धन्यबाद।
अगस्ट 10, 2016 मा 10: 42 AM
उत्कृष्ट लेख। म मेरो अनुभव "सम्पन्न" को साथ साझा गर्ने छु, यो एक प्रोजेक्ट प्रबन्धन सफ्टवेयर हो।
एकचोटि सम्पन्न अनुप्रयोग हाम्रो व्यवसाय प्रक्रियामा लागू भएपछि हामीले महसुस गर्‍यौं कि हाम्रो समूहका कर्मचारीहरूका बीच उत्पादकत्व स्तरहरू सबै ठाउँमा थिए र हाम्रो परियोजना व्यवस्थापकहरू प्रति ग्राहक प्रोजेक्टमा उपयुक्त घण्टा बिल गर्नमा अभावका थिए। पहिलो महीनामा, प्रणाली कार्यान्वयन पछि, हामी बिलयोग्य घण्टामा १०% भन्दा बढी रिकभर गर्न सक्षम भयौं।
टोलीका केहि सदस्यहरूले सोचे कि हामी उनीहरूसँग जासूस गर्दैछौं। केहीले अन्य टोली सदस्यहरूलाई गल्ती गरे, र अरूले सुन्न चाहेनन् र कम्पनी छोड्ने निर्णय गरे। तर दिनको अन्तमा, सन्देश बाँकी टोली सदस्यहरूले बुझेका थिए र, आज टोली फेरि लाभदायक छ। हाम्रो प्रोजेक्ट ब्यवस्थापकहरूले लामो समय सम्म टोलीको अनुगमन गर्न आवश्यक पर्दैन, र सबैले व्यक्तिगत स्वायत्तता प्राप्त गरे।
बाह्र महिनाको प्रयोग पछि, हाम्रो नाफा गत बर्षको तुलनामा %०% भन्दा बढि थियो। सम्पन्न पारदर्शिताले उच्च स्तरको प्रदर्शन कायम राख्दै टीमहरूलाई बढी निर्मल कार्य वातावरण दिने प्रस्ताव राख्यो।
म तपाईंलाई भ्रमण गर्न सल्लाह दिन्छु http://www.doneapp.com थप जानकारीको लागि।
सैन्ट डी क्लेयर
सेप्टेम्बर १,, २०११ 12::2017० अपराह्न
Bitrix24 प्रयास गर्नुहोस्। यो तपाईंसँग के चाहिन्छ र चाहिएको सबैमा छ। म डिजिटल एजेन्सी पनि चलाउँछु। मैले पनि यस्तै दुखाई महसुस गरें